Small Ac Electric Motor Suppliers, Manufacturers, Factory kubva China - Shandong Better Motor
Motors For muvezi Machine & For Gardening Chishandiswa
Motor For Chainsaw michini (HC8840A)
Motor For Chainsaw michini (HC20230A / HC16230A)
HC76 Dzinotibatsira yakakwirira kumanikidzwa pesin (HC7625 / 30/40)
Permanent Magnet Motors For Air Compressor (ZYT7 ...
Permanent Magnet Motors For Air Compressor (ZYT ...
Motor For Air Compressor (HC7640K / P / I)
Nani Kuwana mumwe Higher Annual Outp ...
2016 mumwe gore pamusoro Better Motor yokukohwa, nokuti nemakasitoma 'rutsigiro uye vashandi nani' zvakaoma kushanda. Tiri kuwana kukura uye mberi gore negore. Annual goho muna 2016 ndiyo mamiriyoni 2,9 rinovira, 450,000 rinovira Inc ...
Engineer Li Dongwei kubva Ohio State Unive ...
On June 8, Electric Engineering uye kushandisa michina Engineer Li Dongwei kubva Ohio State University USA akashanyira Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral muongorori kubva zvemagetsi nesayenzi rabhoritari mu Ohio ...
The chirongwa chikwata mashoko syste ...
On June 26, basa chikwata mashoko hurongwa ouinjiniya Chirongwa nani Motor rakaumbwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ari mutariri mazano uye kushanda basa iri. Hazvina pla ...
Portescap anotanga itsva 16DCT injini yayo yakakwirira torque DCT siyana Athlonix Motors. The 16DCT injini anogona kununura kuramba torque kuna 5.24 mNm ari kureba chete 26mm. The 16DCT utilizes simba Neodymium Ma ...
vacuüm cleaners basa sei?
Anozvininipisa vacuum ndechimwe handiest mhuri rokutsvaira midziyo yemagetsi anoshandiswa nhasi. Its nyore asi ichibudirira design zvaitwa kure nokuva kuchenesa guruva uye zvimwe zvacho diki kure hukawanika noruoko, uye Tu ...